Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo xalay soo gaaray magaalada Cammaan ee dalka Urdun (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo xalay soo gaaray magaalada Cammaan ee dalka Urdun (SAWIRO)
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa habeenkii xalay soo gaaray magaalada Cammaan ee dalka Urdun, halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Cammmaan kusoo dhaweeyay wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha dalka Urdun Dr. Mamduuc Al-cabaadi iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dalkaas.
Madaxweynaha ayaa maanta oo Arbaco ah ka qeyb-gali doonno shirka 28aad ee Jaamacadda Carabta, waxaana safarkiisa ku wehliya mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Waa safarkii seddaxaad uu madaxweyne Farmaajo dalka dibadiisa uga amba-baxo muddo 40 cisho gudahood ah tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 8-da bisha Febraayo ee sanadkaan.
Sidoo kale, waa markii ugu horeeysay uu madaxweyne Farmaajo kasoo dhex muuqdo shir ay yeeshaan madaxda dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta, waxaana arrimaha ugu waaweyn ee shirkaasi maanta looga hadli doonno ka mid ah dhibaatooyinka ka taagan dalalka Carabta oo ay dalka Soomaaliya ka mid tahay.